HSE, ihe nchekwa uzo mepere emepe, kacha SSE maka SSD | Site na Linux
Micron Technology (ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta nke DRAM na nchekwa nchekwa) kpughere iwebata igwe ohuru ana akpo "HSE" (Etelọ Nche Nchekwa dị iche iche), nke e mepụtara site na iji ihe eji eme ihe n'uche na NAND flash dabere na draịva SSD (X100, TLC, QLC 3D NAND) ma ọ bụ ebe nchekwa naanị (NVDIMM).
The engine ka n'ụdị a n'ọbá akwụkwọ itinye n'ime ngwa ndị ọzọ na na-akwado nhazi data na isi-uru usoror. Edere koodu HSE na C ma kesaa n'okpuru ikikere Apache 2.0.
N'etiti ngwa engine, a na-akpọ ngwa maka nchekwa data dị larịị na DBMS NoSQL, ụlọ nkwakọba ihe ngwanrọ (SDS, nchekwa akọwapụtara ngwanrọ) dị ka Ceph na Scality RING, nyiwe maka ịhazi ọtụtụ data (Big Data), sistemụ arụmọrụ dị elu (HPC), Internet nke ihe (IoT) ngwaọrụ na azịza maka sistemụ mmụta igwe.
- HSE kachasị mma ọ bụghị naanị maka arụmọrụ kachasị, kamakwa iji hụ na ịdịgide nke ụdị SSD dị iche iche. Emechara nnukwu ọsọsite na ngwakọ ngwakọ ngwakọ: a na-echekwa data kachasị mkpa, na-ebelata ọnụọgụ nke ịnweta diski.
Dị ka ihe atụ nke ijikọ engine ọhụrụ n'ime ọrụ ndị ọzọ, a kwadebere akwụkwọ ederede nke MongoDB DBMS, nke atụgharịrị iji HSE.
Na teknụzụ, HSE dabere na modul kernel ọzọ mpool, nke na-etinye atumatu pụrụ iche maka ịchekwa ihe maka draịva siri ike, na-eburu n'uche ikike na njirimara ha, na-enye ohere maka njirimara dị iche iche nke ọsọ na ngwa ngwa. Mpool bụkwa mmepe Micron Technology na-emeghe n'otu oge na HSE, mana ọ pụtara dị ka ọrụ akụrụngwa dị iche. Mpool na-ewere ojiji nke ebe nchekwa na nchekwa mpaghara, mana ugbu a naanị ndị SSDs ọdịnala na-akwado.
Nlere arụmọrụ na ngwugwu YCSB (Yahoo Cloud Serving Benchmark) gosipụtara mmụba dị ịrịba ama na arụmọrụ mgbe ị na-eji nchekwa 2TB na nhazi ngọngọ data 1KB. A na-ahụ mmụba arụmọrụ dị ịrịba ama na ule ahụ yana nkesa arụmọrụ na-agụ na ide.
Dịka ọmụmaatụ, MongoDB na igwe HSE gbanwere ihe ruru ugboro asatọ ọsọ karịa nsụgharị ya na ọkọlọtọ WiredTiger, yana igwe RocksDB DBMS karịrị HSE karịa oge 6. A na-ahụkwa ihe ngosi magburu onwe ya na ule, nke gosipụtara 95% nke arụmọrụ agụ na 5% nke mgbanwe ma ọ bụ mgbakwunye.
Nnwale ọzọ a rụrụ gụnyere ịgụ arụmọrụ naanị, ọ na-egosi uru nke ihe dị ka 40%. Nrịbawanye nke ihe nfe nke SSDs n'oge arụmọrụ ederede ma e jiri ya tụnyere ihe ndabere RocksDB bụ oge 7.
Key Akụkụ nke HSE:
Nkwado maka ndị ọkọlọtọ na ndị ọrụ dị elu hazie data na isi / uru usoro;
Nkwado azụmahịa zuru ezu yana iji ikewapụ ngalaba nchekwa site na ịmepụta snapshots (snapshots nwekwara ike iji jigide nnakọta dị iche na ụlọ ahịa).
Ike iji cursors na-agafe data na snapshot dabeere onodi.
A na-emezi usoro data maka ụdị ibu dị iche iche na otu nchekwa.
Usoro mgbanwe jikwaa nchekwa ntụkwasị obi.
Usoro nhazi usoro nhazi data (nkesa site na ụdị nchekwa dị iche iche dị na nchekwa).
Ọbá akwụkwọ na C API enwere ike ijikọ ya na ngwa ọ bụla.
Ikike ịbawanye na terabytes nke data na ọtụtụ narị ijeri igodo na nchekwa.
Irè rụọ ọrụ nke ọma nke ọtụtụ puku arụmọrụ yiri.
Increasebawanye ụba na bandwidth, belata latency, na mmụba ọgụgụ / ọgụgụ dị elu maka ụdị ọrụ dị iche iche ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị na-ahụkarị.
Ikike iji klas dị iche iche nke SSDs n'otu nchekwa ahụ iji bulie arụmọrụ na njigide.
Can nwere ike ịnweta koodu engine site na njikọ dị n'okpuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » HSE, ihe nchekwa ihe mepere emepe, kachasị SSE maka SSD